नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्ने, कारण यस्तो छ ! - नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्ने, कारण यस्तो छ !
२०७6, ३ बैशाख, 06:49:31 PM
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ बाट राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्ने भएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दे कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियानको घोषणा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विभिन्न १४ बुँदे उद्देश्य राखी घोषणा भएको अभियान तीन चरणमा हुने बताए । सरकारको अधिनायकवाद देखि मधेशको माग पूरा गराउने लगायतको एजेण्डा कांग्रेसको रहेको छ ।
यसैगरी, निर्मला पन्तलगायतका घटनाको छानविन, विपदमा क्षति भएकाको पुर्नस्थापनामा सहयोग, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार लगायतको कुरा जागरण अभियानमा उठाइने कांग्रेसले जनाएको छ ।
जागरण अभियानको पहिलो चरण ११ वैशाखदेखि जेठ ११ गतेसम्म ७७ वटै जिल्लामा हुनेछ । केन्द्रीय नेताहरु प्रत्येक जिल्लामा एक महिनासम्म बस्ने शर्माले बताए ।
यसैगरी बीपी जयन्तीबाट सुरु हुने दोस्रो चरणको अभियान १५ दिनसम्म चल्ने छ भने तेस्रो चरणको अभियान १० दिनसम्म ७५३ वटै स्थानीय निकायमा हुनेछ । उक्त निकायहरुमा १० दिनसम्म केन्द्रीय नेताहरु बस्ने जनाइएको छ ।
अभियानका क्रममा कांग्रेसले पार्टीको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको दस्ताबेज संकलन गर्नुका साथै पुराना नेताहरुको खोधीखोजी समेत गर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनका काग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले कांग्रेसप्रति जनताकोविश्वास बढाउन पनि अभियान महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । वर्तमान सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको भन्दै उपसभापति निधिले यसलाई बुझाउन जागरण अभियान सुरु गर्न लागिएको बताए ।
जागरण अभियान अन्र्तगत पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रशिक्षणका कार्यक्रम पनि चलाउने कांग्रेसले जनाएको छ ।